agaallo aad u qaraar oo ka dhacay deegaanno ka mid ah gobalka… |
agaallo aad u qaraar oo ka dhacay deegaanno ka mid ah gobalka…
Wararka naga soo gaaraya gobalka Bakool ayaa sheegaya in todabaadkaan ay halkaasi ka dhaceen dagaallo aad u qaraar oo u dhexeeya Ciidamada Amisom iyo kuwa Dawladda oo dhinaca ah iyo Xarakada Alshabaab.
Dagaaladaan ayaa lagu soo waramayaa in Xarakada Alshabaab looga qabsadey deegaanno dhawr ah.
Guddoomiyaha ku xigeenka gobalka Bakool Cabdi Nuur Maxamed oo u waramayayay warbaahinta ayaa sheegey in dagaalkii u dambeeyey uu ka dhacay deegaanka Maddaa oo ka tirsan degmada Tiyeegloow, kaasoo sheegay in Xarakada Alshabaab ay oga dileen illaa 30 Askari, isla markaana ku qabsasdeen hub iyo saanad kale oo badan, dhankoodana ay oga dhimatey Laba Askari Afar kalana dhaawacantey.
Dhinaca kale waxaa uu Guddoomiye ku xigeenku sheegay in dagaallo kale ay isla waqigaa oo ah niskii dambe ka dhaceen deeganada Dhariyoow, Ceeldheer, Ceelxoog ee dhinaca gobalka Hiiraan uu xaduudka kala leeyahay Gobalka Bakool, kaasoo qasaaraha uu dib ka soo shiigi doono.
Ma jiraan warar madax banaaan oo nasoo gaarey oo ka dawan hadalka Guddoomiye ku xigeenka gobalka Bakool, mana jiraan illaa hadda warar kale oo naqdinaya kuwaas oo naga soo gaarey dhinaca Alshabaab.
Xaaladda nolaleed ee deeganadda ay dagaaladu aafeeyeen ayaa lagu soo waramayaa inay tahay mid aad u liidato, kuwaasoo aan haysan wax gargaar ah.